RxSense inohwina muAmerica Chakanakisisa Kutanga Kwevashandirwi 2021 mubairo kubva kuForbes - Kambani | Chikunguru 2021
Zvipfuwo Hutano Dzidzo, Nhau Zvinodhaka Info Nhau, Wellness Nhau Dhinda Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Wellness Dzidzo Yehutano Kambani, Iyo Checkout Nharaunda, Kambani Info Info, Hutano Dzidzo Kambani, Nhau Hutano Dzidzo, Hutano Kambani
Kuru >> Kambani >> RxSense inohwina muAmerica Chakanakisisa Kutanga Kwevashandirwi 2021 mubairo
Forbes yakasarudzwa RxSense—Kambani yemubereki yaSingleCare--seimwe yeAmerica Yakanakisisa Kutanga Kwevashandirwi 2021-yeiyo gore rechipiri mumutsara ! Isu takaenda kumba # 148 nzvimbo, chinzvimbo kunyange chakakwirira kupfuura muna 2020. Forbes uye Statista akasarudza makambani mazana mashanu epamusoro muU.S. achishandisa zvinopfuura mamirioni manomwe data poindi kutetepa munda. Vakatarisa pamatanho matatu makuru:
RxSense inoshandisa vanhu vanopfuura mazana maviri nemakumi mashanu muBoston, New York City, Palm Beach Gardens, nemamwe maguta kutenderera nyika. Kana iwe usiri kujairana neSingleCare, isu tiri basa rekuchengetedza mari rinopa makadhi ekudzora anobatsira vanhu kuchengetedza kusvika ku80% pamishonga yavo-inofambiswa neRxSense, kambani yehunyanzvi hwekuchengetedza hutano yakazvipira kubatsira vazhinji veAmerica kuwana uye kutenga mishonga yavo.
Pedyo 1 mu4 vanhu vanotambura kubhadhara mushonga wavanoda kurapa mamiriro ehutano, dambudziko riri kuramba richikura kubva apo COVID-19 denda rova ​​kuUS Chinangwa chedu ndechekusimudzira kuwanikwa kwemishonga nekuteerera nekubatsira kudzikisa mutengo wemishonga yaunoda, kwete mutengo kwauri.
Sei? RxSense uye SingleCare inopenya mwenje mubhokisi dema remutengo wekurapa, zvichikubvumidza kuti uenzanise kuchengetedza kumafarmasi padyo newe saka zviri nyore kusarudza mutengo wakaderera. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuunza coupon yedu newe kukambani yefesi kana iwe unotora yako Rx. Zviri nyore kudaro! Kubatana kwedu kwemishonga yemishonga, kwakadai seCVS, Walgreens, uye Walmart, uye nemitengo yakaderera inoita kuti zvive nyore kumamirioni evashandisi kurarama hupenyu hune hutano.
Ingozvitora kubva kuvashandi vanofarira kushandira iyo kambani iyo yavanoziva iri kushanda kuti iite nyika ive nzvimbo iri nani.
Ini ndinoda vanhu vandinoshanda navo, anodaro Pavel Nabatchikov, director wekushambadzira kwedhijitari kuSingleCare. Ndinoda kambani uye chigadzirwa. Zvakanaka kunzwa kuti ndiri kuita chimwe chinhu chakanaka, chimwe chinhu chine musoro. Hatisi kungotengesa zvipfeko, isu tiri kunyatso kubatsira vanhu kuwana zvirinani mishonga inodhura. Izvi zvinoreva zvakawanda.
RELATED: Kubatsira vatengi veSingleCare kugadzirisa matambudziko
Ini ndinofunga kuti zvatiri kuita sekambani-kubatsira vanhu kuwana zvirinani kuwana Rx yavo - zvinoshamisa, anodaro Alanna Inniss, murongi weakaunzi kuSingleCare.
ndoziva sei kuti plan b yakashanda
Zvatinoita zvinoita mutsauko muhupenyu hwevanhu, anodaro Geoffrey Bullock, anobatsira tafura nyanzvi paSingleCare. Isu tinowirirana nezviuru zvevatengi pazuva. Kuziva kuti ndinogona kuvaudza kuti rubatsiro rwavanoda rwuri pano, uye kungoedza kuvapa ruzivo rwakakura, ndizvo zvinondituma kuti ndimuke zuva nezuva, ndiende kubasa, uye ndipinde mukati.
RELATED: Vashandi vefoni kuti vape yakanakisa SingleCare vatengi sevhisi inogoneka
Verenga zvizere Forbes chimiro, uye dzidza nezve vamwe vakundi, pano . Iwe unogona zvakare kutarisa uye kunyorera kumabasa ku SingleCare uye RxSense paLinkedIn kana yedu Peji yemabasa pano .
Ndiani anofanira kuwana apnea yekurara bvunzo?
Off-label mishonga yemishonga: Zvaunoda kuziva
ndeupi musiyano uripo pakati pemetformin uye metformin yakawedzerwa kuburitswa?
hapana inishuwarenzi yehutano asi unoda kuona chiremba
maitiro ekuwana zororo ipapo kubva kuzvimbirwa
furuu inogara kwenguva yakareba sei muvanhu vakuru
can cranberry mapiritsi anorapa chirwere chembiriso